कलंकीबाट प’क्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो ह’र्कत गर्थे ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कलंकीबाट प’क्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो ह’र्कत गर्थे !
कलंकीबाट प’क्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो ह’र्कत गर्थे !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ठगी, लुटपाट तथा पकेटमा’रीमा संलग्न महिलोको गिरोह पक्राउ परेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलंकीबाट दुई जना महिला पाकेटमा’र पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ, गोंगबु ११ की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोक लिसंखु घर भई हाल काठमाडौँ मनमैजु बस्ने २३ वर्षीया सिर्जना उप्रेती रहेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग कंलकीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक मिठ्ठु खड्काले उनीहरुको साथबाट ३४ हजार ५ सय ५० रूपैयाँ समेत बरामद गरिएको जानकारी दिइन् । प्रहरी नायव निरीक्षक मिठ्ठु खड्काका अनुसार उनीहरुलाई पकेट मा’र्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।“यो उनीहरू त्यस दिनको मात्र पकेटमा’रको पैसा रहेछ।
त्यस दिन दुई वटामात्र पकेट मा’रेका रहेछन्। हुलियाको आधारमा समातेका हौँ” प्रहरी प्रभाव कलङ्कीका प्रहरी निरीक्षक मिठु खड्काले भने। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका युवतीले करिब ३ वर्ष देखि पकेटमा’र गर्दै आएको बयान दिएका छन्। *** याे समाचार काे पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
जोरबिजोर प्रणाली हटाइए संगै काठमाडौं सडकमा देखियो यस्तो अनौठो दृश्य